ရင်တွင်းဖြစ် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 10, 2007, 1:26 am Filed under: Lin Let Kyal Sin, True Feelings “မဖြစ်နိုင်ပါဘူး သမီးရဲ့ ”
ကျွန်မ၀ါသနာတွေအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရတော့မည့် လမ်းစတွေကို တွေ့နေရချိန်မှာ ကျွန်မ လက်ထဲမှ ဖောင်တိန်ချောင်းလေးကို စွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည် .. ။ ကျွန်မဘ၀တွင် အလိုချင်ဆုံးသောအရာ (၄)ခု ရှိခဲ့သည်။ ထို (၄)ခုလုံးကို ကျွန်မ စွန့်လွှတ်ရတော့မည့်လမ်းစကို သဘောပေါက်လာချိန်မှာ ကျွန်မမှာ ငိုစရာ အသဲနှလုံးပင်မရှိတော့ပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ရတာထက် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရသော ကျွန်မရင်ထဲက အသဲနှလုံးမှာ ဘာကိုလက်ခံရမှန်းတောင် မသိတော့ပါ ။ အချိန်တစ်ခုကြာမှ ကျွန်မ ပြန်ကောက်ယူခွင့် ရမည်ဆိုတာတော့ သိပေမယ့် ကျွန်မလက်ချောင်းတွေကား ထိုအရာကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့။ လူတွေက မိမိဘ၀အကြောင်း ၊ မိမိခံစားချက် တော်တော်များများကို သိမ်းဆည်းထားချိန်မှာ ကျွန်မက လွတ်လပ်စွာ ပေါက်ကွဲလေ့ရှိသည်.. ။ ထိုသံစဉ်စကားလုံးများနောက်ကွယ်မှာ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ ကပ်ငြိနေသည် . ။ ဖြစ်သင့်တာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာကြား ဖြစ်ချင်တာတွေ သိုဝှက်ပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေကြား အမြဲ လက်ပစ်ကူးနေရသော ဘ၀ကို ကျွန်မ တစ်ခါတစ်လေ စက်ဆုပ်မိသည် .. ။
ချစ်သူက ပြောခဲ့ဖူးသည် .. “ကျွန်မအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူသည်”ဟု … ။ မောင်နှမတွေက ပြောဖူးသည် “ညီမလေးအတွက် ဂုဏ်ယူသည်”ဟု … ။ အားပေးသူတွေက ပြောဖူးသည် “လေးစားသည်”ဟု … ။ တကယ်တော့ ကျွန်မက တစ်စက်မှ အသုံးကျသူ မဟုတ်ပါ .. ။ ကျွန်မကိုကျွန်မ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းသည်ဟုလဲ မမြင်ခဲ့ဖူးပါ .. ။ ဘာကောင်းကျိုးမှ ပေးတတ်သူ မဟုတ်ပါ .. ။ ကျွန်မကို ချစ်သောသူအားလုံးနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာကိုမှ လိုချင်တတ်သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည် .. ။ ကျွန်မက တော်ဝင်သဇင် မဟုတ်ပါ .. ။ စံပယ်ဖြူလို အမြဲ မအေးမြနေပါ .. ။ ခရေပန်းလို အမြဲမမွှေးပျံ့နေပါ .. ။ မြက်ရိုင်းကြားမှ ကြိုးစားထိုးထွက်နေသော ပန်းရိုင်းတစ်ပွင့်သာလျင် ဖြစ်သည် .. ။ တကယ်တော့ ကျွန်မ မထူးချွန်ပါ .. ။ ငွေကြေးတွေ တွက်ချက်ဖို့ထက် ကျွန်မလက်တွေက စာရေးဖို့ပဲ သိသည် .. ။ လူ့လောကထဲမှာ လူပီသစွာ အခြေအနေအလိုက် လှည့်ဖြားနေတတ်ဖို့ထက် ကျွန်မစိတ်ထဲရှိတာကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဖို့ပဲ ကျွန်မ သိသည် .. ။ ဦးနှောက်တွေနှင့် တွက်ချက် လုပ်ယူနေသော လူ့လောကထဲမှာ ကျွန်မကတော့ နှလုံးသားက တောင်းဆိုချက်ကိုသာ နားလည်သည် .. ။ ကျွန်မ စိတ်ချမ်းသာဖို့ထက် ကျွန်မကို ချစ်သောသူများ စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုသာ ကျွန်မ သိသည် .. ။ ကျွန်မလိုချင်တာထက် အများလိုချင်တာကိုပဲ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်လေ့ရှိသည် .. ။ ဓနတွေထက် အနုပညာဖန်တီးမှုကိုသာ စိတ်ဝင်စားသည် .. ။ တကယ်တော့ ကျွန်မသည် လူမဖြစ်သင့်ဘဲ ကျောက်ရုပ်သာ ဖြစ်သင့်သည် .. ။ လက်ရှိအသိုင်းဝိုင်းကြားမှာ ကျွန်မ ဘယ်သူ့လုပ်ရပ်ကို သဘောကျလဲဟု ပြောရလျင် “အကိုညီလင်းဆက်” ဖြစ်သည် .. ။ ကျွန်မ သူနှင့်စသိချိန်က ကျွန်မ စင်ကာပူရောက်ပြီး သိပ်မကြာချိန် .. ။ “လိုချင်တာတစ်ခုရဖို့ထက် ဖြစ်သင့်တာတွေနောက် အရင်လိုက်ရင်း ဖြစ်ချင်တာတွေက ပျောက်ဆုံးကုန်ရော”ဟု သူပြောခဲ့သော စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်မရင်ထဲတွင် ယနေ့တိုင် စွဲနေဆဲ .. ။ ကျွန်မ မလုပ်နိုင်သော အရာတော်တော်များများကို သူလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြည့်ရင်း ကျွန်မ လေးစားနေမြဲ .. ။
လင်းလက်ရေကိုယ်လိုချင်တာအတွက် တခုချင်းအစကနေ ပြန်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့ တခုပြီးတခု ရှိလာမှာပါ။အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲလိုက်ရတာတွေလည်း ရှိတာပဲမဟုတ်လား။ဘယ်တော့မှ အားမငယ် စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။အန်တီတို့တွေလဲ ဘ၀မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ခဏခဏ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရတာ ခုချိန်ထိပါပဲ။
Comment by ခင်မင်းဇော်
July 10, 2007 @ 12:29 pm Reply	ညီမလေး လင်းလက်ရေစိတ်မလျှော့ပါနဲ့ကွယ်..
July 10, 2007 @ 1:24 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI